Kwaye ngoku kwicala elimnyama leB2B yokuThengisa umxholo | Martech Zone
Kwaye ngoku kwicala elimnyama leB2B yokuThengisa umxholo
NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 Douglas Karr
Njengokuba inkampani isebenzisa izixhobo eziyimfuneko kwisicwangciso esisebenzayo somxholo, ngamanye amaxesha yinkcitho enzima ukuyiginya kuba ifuna ukufumana amandla kunye negunya kwishishini labo. Ngokwenyani abanalo ukhetho ngaphandle kokuthenga izikhokelo ezibiza kakhulu ngeentengiso kunye neenkqubo zokukhangela ezihlawulelwayo. Kwaye ukulinda ayingomceli mngeni kuphela- le infographic evela kwiZibhalo icacisa imiceli mngeni embalwa kodwa ibonelela ngeendlela ezithile zokoyisa.
Njengoko umxholo wentengiso uqhubeka ukwanda ngokuthandwa kuwo onke amashishini, abathengisi abaninzi bajolise kwixabiso elinokuzisa itafile. Kuyinyani, ukuthengisa umxholo kuyindlela elungileyo yokufikelela kubaphulaphuli abatsha, ukuvelisa ulwazi ngophawu, ukufundisa abathengi nokunye okuninzi- kodwa inokuba yingozi kwisicwangciso sentengiso, ngakumbi ukuba ayenziwanga ngendlela eyiyo. UNicole Karlis, obhaliweyo
Isiqingatha sabo bonke abathengisi abanaso ziweyo iqhinga lokuthengisa umxholo kunye nama-62% bacinga ukuba yimizamo yabo ngasebenzi. Ewe kunjalo, iipesenti ezingama-21 azinjalo ukulinganisa yintoni imbuyekezo kutyalo-mali kwaye sisiqingatha sesithathu kuphela somxholo owenziweyo opapashiweyo. Isikripthi sibonelela ngeendlela ezi-8 zokuthintela le mingeni-ukusuka ekubhaleni isicwangciso-qhinga somxholo, ukwenza ikhalenda yomxholo kunye nokukhutshelwa okungaguqukiyo, ukuseka iinjongo, ukuhlalutya abaphulaphuli bakho, kunye nokuphindaphinda umxholo osebenzayo.
Jonga zonke iinkcukacha kule infographic kwaye ucofe ukuya ngaphaya kwebhlog ebhaliweyo apho banetoni yezixhobo zokuphucula iqhinga lokuthengisa kunye nokwenza!
tags: b2bUkuthengisa umxholo we-b2bImiceli mngeni yokuthengisa umxholoimingeni yomxholo
Nazi iiNgcebiso zakho ze-imeyile zeXesha leeholide lika-2014